Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → septembre → 2 → Rolly Mercia : « Miady amin’ny fahafatesana », hoy ny vadiny
Redaction Midi Madagasikara 2 septembre 2020 4 Commentaires
CAROLE 2 septembre 2020 at 16 h 51 min · Edit
@ Mariana sy ry j.rakoto de Paris
Aza mandray an-tendrony miheno feon-dakolosy tokana fa hanontanio aloha ny tompon’andraikitra lehiben’ny fonja sy ny dokotera eny Antanimora . Ary inona no hidiran’ny 2009 amin’izany ? Hitony Mariana itony mihitsy no tena kely saina manafangaro resaka . Ilay j.rakoto de Paris tsy mahagaga mba any andafy ihany kanefa ny fisainana mbola jomaka eny Isotry !
j.rakoto de Paris 2 septembre 2020 at 13 h 19 min · Edit
+Tafahoatra loatra ity tantara ity ,tsy mahafantatra izay tena hanamelohina azy ny rehetra ,fa kosa ,raha misy tsy fahasalamana mahazo ny voafonja ,dia zony ny homena fitsaboina ,eny fa na dia hiafara amin’ny fidirana hopitaly .Tena tsy rariny intsony izao ,ary ireo dokotera miasa ao amin’ny fonja ary dia hadinony sahady ,ny velirano nataony,sa mahery be ny teny midina ka na efa ambava haona ary ilay tsy salama dia jerena fotsiny amin’ny ,hataovy an tsaina tompko ny deontologie amin’ny maha mpitsabo anareo .
Mateza 2 septembre 2020 at 10 h 54 min · Edit
Ny loza dia mankafy azy foana ny gasy vendrana, izany hoe ilay vahoaka mihitsy no tena
kely saina sy mora ampiesonina na dia efa nampitandremana dieny mialoha aza.
Mariana 2 septembre 2020 at 8 h 36 min · Edit
Mamono olona mivantana aza vitan’io fitondrana io nanomboka ny taona 2009, izay manelingelina azy rehetra ka tratrany dia pan! Ny tantara tsy fanadino, fatiolona marobehatrizay ve? Mainka fa olona gadrainy ho fatin’ny aretina fotsiny eo! Fitondrana mahavanondoza io e, asakasak’izay mino ny fampandriana adrisa ataaony!
Mahafanta-javatra i Rlly Mercia ka ampanginina!